Maxaan uga baahanahay edbinta inaynu nahay hal abuur? | Abuurista khadka tooska ah
Badiyaa waa markaan tixraacno hal-abuurnimo iyo farshaxan ahaan edbin bilaash ah. Halo dhiirrigelin ah ayaa timaadda wakhti kasta oo maalinta ah oo shaqo ku siisa. Saacaduhu kuma xisaabtamaan kalandarkayaga sidaa awgeed waxaan is tusnaa nafteena marka loo eego shaqadeena. Ma muujineyso shaqo laba jibbaaran sida tan maamul. Maaddaama aynaan maamul ahayn, ma lihin jadwal ama tilmaamo. Anshax la’aantaan ayaa sidoo kale caqabad ku ah maleheena.
Maxaan uga baahanahay edbinta inaynu nahay hal abuur? Jadwal la'aantu waxay naga dhigi kartaa inaan ka shaqeyno wax ka badan intii loo baahnaa, in kastoo mararka qaar ay umuuqato inay tani faa'iido tahay markii aan dhex galnay mashruuc, mararka qaarkood maahan. Marar badan maahan. Xad dhaafkan ayaa kaa dhigi kara inaad lumiso awoodaada inaad diirada saarto howlaha aad qabanaysid. Sidoo kale, lumiso xiisahaaga adoo hubaal inaadan arkin horumar. Waqtigaas marka aynaan garanayn sida loo sii wado ayaa ka wanaagsan inaan ka tagno.
Mararka qaarkood waxay kaa dhigeysaa inaad ka tagto adoo ka tagaya, oo gaaraya daqiiqada "Waxaan bilaabayaa berri" oo gal diidmada joogtada ah ee xad dhaafka ah ee aan la aqbali karin madaxeena. Instagram, Facebook, iwm noqo xulufadeena in la buuxiyo meelahaas. Taasi waa sababta edbintu muhiim ugu tahay hal-abuurka sidoo kale.
Dadka qaarkood ee maareeya inay helaan anshaxa ay ugu baahan yihiin maalinba maalinta ka dambeysa waxay ku eedeeyaan "khiyaanadii hore" ee 8 saacadood. 8-da saacadood waxay ka kooban yihiin inaad u qaybiso maalintaada saddex qaybood: Hurdo, Shaqo oo isticmaal waqtigaaga firaaqada. In kasta oo ay run tahay in edbinta noocan oo kale ah ay adag tahay oo qof walbaa kuma guuleysto habeen Samee halabuurkan adigoon lahayn dadaal badan iyo waqti u hurid hore. Laakiin haddii ay jiraan tallaabooyin gaar ah oo aan qaadi karno ka hor intaanan gaarin culimada ujeedkeenna.
3 Qubeyska iyo heerkulkiisa
Hawsha darnayd ee cadayashada ilkaha cunno kasta kadib. Mararka qaarkood, dad badan ayaa ka taga hawshan sababta oo ah waxay eegaan moobilkooda oo waxay arkeen wax xiisaha u leh qofkaas. Waxaan ilaawnaa ama waqtiyada kale waxaan isku aragnaa banaanka mana sameyn karno. Taasi waa fikradda mid kasta oo ka mid ah 'hawlaha' soo socda. Taasi waxa waqtigeenna hakad gelinaya ayaa ah waxa mudnaanta leh.
Hawsha fudud sida cadayidda ilkaha isla marka aad wax cuntid ka dib waxay caado ka dhigan doontaa maalintaada. Oo waxay ku bilaaban doontaa iyadoo la abuuro amar. Xusuusnow, ha ka boodin.
Layligani sidoo kale waxaa loo qaabeyn karaa dhaqidda saxamada. Haddii aad caado u leedahay cadayashada, waxaad isku dayi kartaa inaad dhaqdo suxuunta isla marka aad dhameyso cunista. Dhib malahan haddii aad leedahay weel dhaqe ama qof horeyba u qabtay howlahaas. Markaad dhamaysid cunnada, saxankaaga, galaaskaaga iyo waxyaabaha aad wax ku goyso, adiga ku dhaq gacmahaaga.
Aniga ahaan, mid kamid ah howlaha ugu adag ee howlahayga caadiga ah. Ka soo degitaanka sariirta shaqadii ay horey u qabatay iyo in la sameeyo. Iyo mabda 'ahaan ujeedada ah in laga takhaluso saacado yar ka dib isla maalintaas. Laakiin waa lagama maarmaan. Caadadani waxay ku siin doontaa amar bilowga maalintaada. Waxaad dhammeysay hadafkii ugu horreeyay ee maalinta, markaa kuwa kale waajahi doonaan fudud sida loo sameeyo sariirta.
Sidoo kale, markaad ku noqoto gurigaaga, amarku wuxuu kaa caawin doonaa inaad nasato oo aad ku raaxaysato inta ka hartay maalinta iyada oo ay yar tahay inaad qabato.
Qubeyska iyo heerkulkiisa
Dhamaanteen waxaan dareemeynaa baahida loo qabo in lagu qubeysto heerkul wanaagsan oo biyo ah. In lala dagaallamo cudurdaarkeenna waa hawsha ugu adag ee na hortaalla. Adeegsiga ilbiriqsiyadii ugu dambeeyay ee qubeyskeena si aan ula macaamilno raaxo la'aantaas waxay naga caawin doontaa inaan gaarno anshax dheeraad ah
Waxaa jira edbiyo badan oo badan oo aan raaci karno wadadeena si aan u gaarno yoolalkayaga. Waxay sidoo kale ku xirnaan doontaa noloshaada, waxaan soo jeediyay inaan naftayda ku edbiyo shaqadayda maqaallada, haddii aad wax qorto, waa fikrad fiican inaad sidaa sameyso. Waxaa jira kuwo aad u horumarsan oo aad u badan, laakiin muhiimaddu waa in la bilaabo. Haddii aad u malaynayso inaadan awoodin inaad raacdo 3-daan tallaabo isku mar, ku bilow mid. Laakiin ka dhig waxa ugu raaxada daran adiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Maxaan uga baahanahay edbinta inaynu nahay hal abuur?